Voasary makirana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Voasary makirana
Ny karazana voankazo faran'izay tsara indrindra ho an'ny trano mitombo
Afaka mahazo menaka ao an-trano ianao amin'ny fikojakojana ny taolam-biby avy amin'ny voankazo novolena tao anaty tany. Saingy ny kolontsaina izay tonga avy any amin'ny tropika dia tsy mora ny mitombo, mitaky fepetra sasany sy fikarakarana tsy tapaka. Manamora io dingana io ny fifantenana ny karazana vary maro karazana zahova maharitra. Tena ampy ny hazo maro hamokarana ny fianakaviana rehetra amin'ny voankazo hafakely.
Ahoana no handraisana "Limoncello" liqueur ao an-trano?
Ny fahavaratra dia fotoana hisakafoana, na ireo matanjaka aza. Ilay italiana malaza italiana "Limoncello" dia liqueur izay mamelombelona tokoa, ary mety tsara ny mamantatra raha azo atao ny manomana fisotro ao an-trano, ary raha izany, ahoana no hanaovana izany. Description "Limoncello" - iray amin'ireo zava-pisotro malaza indrindra avy any Italie.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Voasary makirana